Linkardipa - Page4of 444 - Entertainment Website
November 25, 2021 Linkardipa 0
မိုးခေါင်၍ ဖားနှစ်ကောင်ကို ပေးစားတဲ့ မိုပြည်နယ် ရေကြီးခဲ့သဖြင့် ထိုဖားနှစ်ကောင်ကို ပြန်လည်ကွာရှင်းပေးခဲ့ရ ဖားနှစ်ကောင်ကို ပေးစားကာ မိုးခေါ်ခဲ့သည့်ပြည်နယ် ရေကြီးခဲ့သဖြင့် ထိုဖားနှစ်ကောင်ကို ပြန်လည်ကွာရှင်းပေးခဲ့ရ ဖားနှစ်ကောင်ကို ပေးစားကာ မိုးခေါ်ခဲ့သည့်ပြည်နယ် ရေကြီးခဲ့သဖြင့် ထိုဖားနှစ်ကောင်ကို ပြန်လည်ကွာရှင်းပေးခဲ့ရ မိုးရွာသွန်းစေဖို့ဆုတောင်းတဲ့အနေနဲ့ဖားနှစ်ကောင်ကိုမင်္ဂလာပွဲကျင်းပပေးခဲ့ပီး နှစ်လခန့်အကြာမှာအိမ်ခြေ (9,000)ခန့်ရေနစ်မြုပ်သွားခဲ့ရလို့ပြန်ကွာရှင်းပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ် နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ကိုယ်ယုံကြည်ရာ၊ကိုးကွယ်ရာဓလေ့ကိုယ်စံကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ထိုနည်းတူပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကမိုးခေါင်ရေရှားတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့ Bhopal မှာ​တော့၊ မိုးခေါ်တဲ့အနေနဲ့မိုးနတ်မင်းကြီးဆီဆုတောင်းပသဖို့ဆိုပီး၊ဖားစုံတွဲကိုမဂ်လာ​ဆောင်ပေးရင်မိုးလာစေတဲ့အယူဓလေ့ကြောင့်ဘုရားကျောင်းတခုမှာမင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲစေခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် Bhopal​ ဒေသမှာမိုးလာစေဖို့ဖားနှစ်ကောင်ကိုလက်ထပ်ပွဲကျင်းပပေးခဲ့ပီးနှစ်လအကြာမှာတော့၊အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ(13)နှစ်တာကာလအတွင်၊းမရွာစဖူးရွာလိုက်တဲ့မိုးသက်လေးပြင်းကြီးကြောင့်အိမ်ခြေ(9,000)ရေနစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့ရပီးရေဘေးဒုက္ခသည်အများအပြားဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ထိုအဖြစ်ကြောင့် Bhopal အစိုးရဟာ၊အလျင်အမြန်ပဲ၎င်းတို့ဒေသခံတွေနဲ့အတူလက်ထပ်ပွဲကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ဖားနှစ်ကောင်ကိုကွာရှင်းစေဖို့အတွက်၊ဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာကွာရှင်းပွဲချက်ချင်းပဲပြုလုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ ထိုဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာကြောင့်ထိုဖားနှစ်ကောင်ရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာလဲ၊အဲ့ဒီညမှာပဲဇာတ်သိမ်းသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ မိုးေခါင္၍ […]
မြန်မာဆေးနည်း (၁၈) နည်း ၁။ သွေးတိုးလို့ သွေးကျလိုလျှင် သံပုရာသီးတစ်လုံးကို( ၁၅ ) မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ရေစိမ်ပြီး အရည်ညှစ်၍ ကြက်ဥတစ်လုံး ဖောက်ထည့်ကာရောမွှေသောက်လိုက်ပါ။ သွေးကျဆေး အထူးသောက်စရာမလိုဘဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ၂။ အပူကျိတ်ဖြစ်ရင် ပါးချိတ်အောက်နှင့် ပေါင်ကြားတို့တွင် ပေါက်တက်သော အပူကျိတ်များကိုပျောက်လိုလျှင် နနွင်းခါးဥကို သွေးလိမ်းပါ။သုံးကြိမ်မျှ လူးရုံ လိမ်းရုံနှင့် ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ၃။ အိပ်မပျော်ခြင်းဖြစ်လျှင် ဒန့်ကျွဲမြစ်ကိုပြုတ်၍သကြားအနည်းငယ်ထည့်ပြီးသောက်ပါ။တစ်ခါသောက်လျှင် အကြမ်းပန်းကန်နှင့်တစ်လုံးသောက် ည ၊ နံနက် သောက်ပါ။အိပ်မပျော်ခြင်းဝေဒနာ […]
သင့်နာမည်ကို ကောင်းလှပြီဟု ထင်နေပါသလား?
သင့်နာမည်ကို ကောင်းလှပြီဟု ထင်နေပါသလား? လှနေတယ်လို့ရော ထင်နေပါသလား? နေ့သင့်နံသင့်ဟုရော ထင်နေပါသလား? မိတ်ဖက်တွေတွဲထားသလား? ရန်ဘက်တွေရောတွဲမိနေသလား? လူတစ်ယောက်အတွက် နာမည်သည်အရေးပါလှပေသည်။ လူရယ်ဟုဖြစ်လာပြီဆို နာမည်တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်ပေသည်။ တစ်ချို့လဲနှစ်ခု တစ်ချို့ကသုံးခု လောက်ရှိမည်။ တစ်ချို့ကမရေမတွက်နိုင်😂😂 ထိုအရေးပါလှသောနာမည်ကို မွေးဖွားပြီး မကြာမှီတွင်ပေးတတ်ကြသည်။ လူတစ်ချို့ကအလွယ်ပေးသည်။ တစ်ချို့ကလေးနက်စွာစဉ်းစားသည်။ တစ်ချို့ကနားလည်တတ်ကျွမ်းသူများနှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှ ပေးလေ့ရှိကြသည်။ နေ့သင့်နံသင့်တွေ လိုက်ဖက်မူတွေ လှပမူတွေ အထားအသို အညွန့်အတက် အခက်အဝေတို့စုံလင်လှပေသည်။ တစ်ချို့နာမည်များသည် ခေါ်လို့ကောင်းသည် တစ်ချို့နာမည်များသည်အေးသည် လှသည် ။ […]
အနံ့ေပ်ာက္ရင္ ဘာလုပ္မလဲ.. အနံ့ေပ်ာက္ရင္ ဘာလုပ္မယ္၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ Home Q မယ္ မေန႔က သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ အနံ့ေပ်ာက္လို႔ ေဆး႐ုံကို သြားစစ္ေနတယ္ေျပာတယ္ (ခုေတာ့ P ထြက္သြားပါၿပီ )ျပႆနာက အနံ့ေပ်ာက္တာ P ထြက္တာမဟုတ္ဘူး။ ဘာကျပႆနာလဲဆို အိမ္မွာႀကိတ္ကုၾကတာ။ သူေတာင္ႀကိတ္မွိတ္ၿပီး သြားမစစ္ဘဲေနေသးတယ္တဲ့။ တူတူေနတဲ့ သူ႔အေဖ လူႀကီးကိုသနားလို႔ ကူးမွာစိုးလို႔ ေဆး႐ုံကို ေရာက္သြားတာတဲ့။ ေျပာခ်င္တာက သူသူကိုယ္ကိုယ္ ႀကိတ္ကုတဲ့သူ ေပါမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေနၿပီ။ေဆး႐ုံေရာက္ရင္ […]
အသုဘ ရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီးအအေးတိုက်မှ ထုတ်ယူလာပြီး သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ ပို့လိုက်သောအခါ အသုဘ ရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီး အအေးတိုက်မှထုတ်ယူလာပြီး နာရေးကားပေါ်တင်၍ သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ေ့ရှကိုနာရေးကားရောက်လာတော့ မိဘကျေးဇူးတွေနဲ့ အယူသီးမှုတွေကို ခွဲခြားသိမြင်နိင်ပြီး သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရား။ အသုဘရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီးအအေးတိုက်မှထုတ်ယူလာပြီး နာရေးကားပေါ်တင်၍ သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့ဆောင်ဖို့မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်… အိမ်ေ့ရှကိုနာရေးကားရောက်လာတော့ အလောင်းကိုအိမ်ထဲသွင်းမယ် လုပ်စရာရှိတာလုပ်မယ်ပေါ့ ကားပေါ်ကနေအလောင်းချမယ်လုပ်တော့ အိမ်ရှင်တွေကအပြေးရောက်လာပြီး မျက်ရည်လေးစမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ ဆရာတို့ အိမ်ထဲအလောင်းမပြင်ဘူးနော် အိမ်ေ့ရှမှာပဲအလောင်းပြင်ပေးပါနော်တဲ့ ” အမဘာဖြစ်လို့လဲ ” […]
ငွေကြေးလာဘ်ရွင်အောင် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာ
ငွေကြေးလာဘ်ရွင်အောင် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာ ကြာသပတေးနေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ် အတွင်း စာရွက် အဖြူ တစ်ရွက်ပေါ်မှာ “န” အက္ခရာ ရေးသားပါ။ ပြီးလျှင် “န” အက္ခကို ပတ်၍ “ဝလုံး” ရေးသားပါ။ ထို “န” အက္ခရာ ရေးသားထားသည့် စာရွက်ပေါ်မှာ ဝါးခြမ်းပြား တင်၍ ဖယောင်းတိုင် မီးထွန်းပြီး မြတ်စွာ ဘုရားအား လှူဒါန်း ပူဇော်ပါ။ […]
တစ်ပါက်စာ ၇ ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း( 25.11.2021 မွ 1.12.2021 ) အထိ
တစ်ပါက်စာ ၇ ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း( 25.11.2021 မွ 1.12.2021 ) အထိ 25.Nov.2021 မှ 1.Dec.2021 အထိတစ်ပတ်စာ ရရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ အဆင်မပြေလိုက်၊ ပြေလိုက်ဖြစ်နေရတတ်သည်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးလေးတွေ အဆင်မပြေစိတ် တိုင်းမကျမှုတွေ ဖြစ်နေရတတ်သည်။ သားသမီး၊ သားချင်းတွေ အတွက်လည်း စိတ်မောရတတ်သည်။ အရာရာ ဆန္ဒမစောသင့်ပါ။ စိတ်ဓာတ်မကျသင့်ပါ။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု အလှူဒါနတွေ ပြုဖြစ်မှာပါ။ ကုသိုလ် များများလုပ်ပါ။ […]
တစ်လလုံးမှ တစ်ညပဲ ရွတ်ရမယ့် ငွေပြည့်ငွေလျှံ ဂါထာ
November 24, 2021 Linkardipa 0
တစ်လလုံးမှ တစ်ညပဲ ရွတ်ရမယ့် ငွေပြည့်ငွေလျှံ ဂါထာ ဂါ ထာ တွေ မန္တန်တွေ ဆိုတာ ဟိုးရှေးခေတ် အခါတည်း က ရှိခဲ့တာပါ….တကယ့်ကို အစွမ်းထက်တဲ့ ဂါထာတွေကြောင့် ကောင်းကျိုးတွေ ရရှိခဲ့တာတွေရှိသလို ထူးခြားမှုတွေ ကြုံရတာလည်း ရှိပါတယ်… မိမိကိုယ်တိုင် ကလည်း ကုသိုလ်ကံကကောင်း ယုံကြည်စွာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့ ဂါထာ ကလည်း အစွမ်းထက်ဆို မိမိအတွက် အလွန့်ကို အကျိုး သက်ရောက်စေတာပါ… ခုဖော်ပြမဲ့ ဂါထာလေး […]
သူရဲကောင်း‌လေး မောင်ဘုန်းမြင့်အောင်ရဲ့ ဈာပနခရီးပုံရိပ်များ…
သူရဲကောင်း‌လေး မောင်ဘုန်းမြင့်အောင်ရဲ့ ဈာပနခရီးပုံရိပ်များ… သဂြိုလ်တာတောင်အလောင်းကြည့်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့..😢 စစ်တပ်က သတ်ဖြတ်လိုက်သော မောင်ဘုန်းမြင့်အောင် နာရေး လက်နက်ကိုင်စစ်သားအပြည့်ဖြင့် အလောင်းကြည့်ခွင့်မရှိ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်မရှိ၊ အခမ်းအနားပြုလုပ်ခွင့်မရှိဘဲ သဂြိုလ်ခိုင်း စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်လိုက်သော မောင်ဘုန်းမြင့်အောင် နာရေး လက်နက်ကိုင်စစ်သားများအပြည့်ဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်၊အခမ်းအနားပြုလုပ်ခွင့် မပေးဘဲ ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်း ရေဝေး သုဿာန်တွင် အတင်းအကျပ် သဂြိုလ်ခိုင်းကြောင်း သိရှိရသည်။ KhitThit Media သဂြိုလ်တာတောင်အလောင်းကြည့်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့..😢 စစ်တပ်က သတ်ဖြတ်လိုက်သော မောင်ဘုန်းမြင့်အောင် နာရေး […]
အသက်ရှည်ရှည်နေရပေမယ့် အိုဇာတာ မကောင်းကြဘူးဗျာ လမ်းဘေးမှာ စျေးရောင်းနေတဲ့ အမေကြီးနဲ့ လမ်းဘေးနေ အမေကြီးတို့အား ONE TO ONE ကလေးလူနာကူညီရေး ကိုဝမ်း (စိုင်းနေမျိုးမောင်မောင်) မှ လိုက်လံ လှူဒါန်းနေမှု ရုပ်သံဖြစ်ပါတယ်။ ONE TO ONE ကလေးလူနာကူညီရေး ကိုဝမ်း (စိုင်းနေမျိုးမောင်မောင်) 09765765179 ၊ မန္တလေ:မြို့ လမ်းဘေးမှာ စျေးရောင်းနေတဲ့ အမေကြီးနဲ့ လမ်းဘေးနေ အမေကြီးတို့အား ONE TO ONE […]
« 1 …345… 444 »